Wararka - Sidee loola macaamilaa Fashilka 'Valve'?
Marka mootadu socoto wakhti dheer, mashiinka mashiinka nadiifinta ayaa guud ahaan soo muuqan doona, ifafaale aad u weyn ama aad u yar, si loo helo sababta, waxaad u baahan tahay inaad la tashato macluumaad badan, alaab-qeybiyaha mootada si uu kuu siiyo falanqeyn fudud.
Saamaynta nadiifinta waalka mashiinka
Yar ama weyn Qalabka mashiinka mootada nadiifintu waxay saameyn ku yeelan doontaa shaqada caadiga ah ee mishiinka. Furitaanka dambe iyo xirida hore ee waalka qaadashada: furitaanka waalka oo aan ku filneyn awgeed, xaddiga marin u helka ay soo tebiyeen isku darka gubanaya waa la dhimi doonaa, taasoo keenta in cilladda mishiinka ay xumaato.
Waalka weyn ee qiiqa (taas oo ah, waqtiga furitaanka waalka waa la soo gaabiyey): geedi socodka qiiqa, wuxuu keenaa qiiq xumo, sicir barar aan kugu filnayn, ciida saliida oo kordhay, heerkulka mashiinka oo xad dhaaf ah, hoos u dhaca awooda, iyo garaaca waalka, oo saameeya nolosha adeegga. qaybaha.
Furitaankii hore iyo goor dambe oo xidhitaanka waalka qaadashada mootada(mudada furitaanka waalka wuu dheeryahay): wuxuu sababa xirnaanshaha waalka dabacsan iyo qulqulka hawada, taas oo yareyneysa cadaadiska iyo awooda matoorka. Xaaladaha daran, waalka wuxuu sameyn doonaa qadar badan oo kaarboon dhiga ama xinjirow ah, sidaa darteed dhululuubku si caadi ah uma shaqeyn karo.
Waalka yar ee qiiqa: waxay u horseedaa xirida waalka dabacsan iyo qulqulka hawada ee Nanchang, sidaa darteed gubashadu ma ahan mid dhameystiran awoodduna wey yaraanaysaa. Mararka qaar waxaa jiri doona dhacdo qarxisa tuubbo qiiq ah.
Sida loola macaamilo waxyeelada qaybaha mootada mootada
1. Dusha sare ee waalka ayaa dillaacsan ama la jaray, kaas oo ay tahay in la beddelo.
2. Ka dib marka wajiga dhamaadka usha waalka la xiro, waxaa lagu sari karaa mashiinka dibedda ka yimaada ee silsiladda ah waxaana la isticmaali karaa ka dib marka dusha jilicsan la soo celiyo.
3. Heerka foorarsiga ee usha waalka ayaa ka badan 0.03mm. Marka dhalanrog xaga sare ee waalka uu ka bato 0.02mm, burooyinka badiyaa waa la sixi karaa adoo ku ridaya saxafad gacmeed ka dibna lagu baarayo tilmaame dial ah bir birta V-ga ah ilaa uu ka qalmo.
4. Haddii ay jirto kaarboon madow iyo gunta oksaydhka dusha sare ee waalka waalka, waxaa lagu qooyn karaa kerosene, ka dibna waxaa lagu saari karaa xoq alwaax ama burush naxaas ah ka dib marka uu jilco.
5. Haddii usha waalka uusan si dhab ah u xirneyn oo qallooca wareegga iyo dhululubada uusan ka badnayn 0.03mm, usha waalka ayaa lagu nadiifin karaa cabbirka dayactirka ee mashiinka wax shiidaya ee aan xudunta lahayn, ka dibna lagu hagaajiyaa habka dahaadhka chrome.
6. Meel yara, godadka, iwm ee dusha koonto waalka inta badan waxaa lagu baabi'iyaa iyadoo gacanta lagu shiido. Kahor shiidi, waalka, kursiga waalka, iyo tilmaamuhu waxay isticmaalaan baatrool nadiif ah, ka dibna koorta waalka ee dahaarka leh caag shiidi kara, oo qalooc ah oo caag ah si uu u soo nuugo dusha sare ee waalka si uu si isdabajoog ah u beddelo una beddelo booska, godadka, godadka, iyo kuwa kale shiidid.
Markay giraan cad ka soo muuqato koonta waalka, waalka ayaa lagu sifeeyay caag shiidi kara. Ugu dambeyntii, ku kariqin koollada shidaalka, saliida mari, kadibna shiid daqiiqado.
7. Godad qoto dheer, godad, iyo dhibco dusha sare ee waalka waalka waa in lagu sifeeyaa mashiinka qiiqa waalka. Haddii qalabka kor ku yaal aan la heli karin, waalka ayaa sidoo kale noqon kara xajin isla markaana isku-uruurinta waxaa lagu cabbiri karaa kolleetiga ku yaal layliga keydka, lathe yar, ama layliga korantada gacanta. Kadib waalka ayaa la bilaabi karaa. Cilladaha waxaa lagu xareyn karaa sagxadda salka leh fayl fidsan oo ganaax ah, dusha sare ee sintiguna waa lagu dhalaali karaa lakab ka kooban 00 dhar emery ganaax ah oo faylka ku jira. Xawaaraha wax shiidaya waa inuusan aheyn mid aad u sareeya, dhaqdhaqaaqa waa inuu ahaadaa mid siman. Haddii geeska sare ee waalka la ogaado inuu ka yar yahay dhumucdiis ama dhumucdiisuna tahay 0.5mm, waa in la beddelaa.
Sidee loola macaamilaa waxyeellada soo gaadhay qaybaha mootada mootada?
(1) Codso lakab khafiif ah oo saliid casaan ah ama saliid blueprinting dusha aalka waalka waalka, ka dibna si tartiib ah ugu cadaadi waalka kursiga waalka una rog meertada 1/4 ka hor intaadan bixin. Haddii uu jiro giraan saliid cas oo isdaba-joog ah ama calaamado saliid ah oo ku yaal kursiga waalka waxay ka dhigan tahay in shaabaddu ay wanaagsan tahay.
(2) Iyada oo qalin jilicsan (4B ama 5B) ku sawir xariiqyo dhowr ah dusha koonto waalka, ka dibna la xiriir kursiga waalka ee wareeji 1/4 leexashada ka dib markaad soo baxdo, sida khadadka qalinka ee koorta waalka la gooyay off, sidoo kale waxay muujineysaa shaabad wanaagsan.
Haddii aad rabto inaad hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waalka matoor tayo wanaagsan leh, fadlan ha ka waaban inaad na weydiiso.